प्रभु बैंक र मातृशिशु मितेरी अस्पतालका बीच एक्सटेन्सन काउण्टर खोल्न सम्झौतामा हस्ताक्षर ! – Samacharpati Samacharpati प्रभु बैंक र मातृशिशु मितेरी अस्पतालका बीच एक्सटेन्सन काउण्टर खोल्न सम्झौतामा हस्ताक्षर ! – Samacharpati
अन्तिम पौडेल , पोखरा, २४ असार । प्रभु बैंक लिमिटेड र मातृशिशु मितेरी अस्पतालका बीच आज एक्सटेन्सन काउण्टर सञ्चालन गर्नु हस्ताक्षर भएको छ ।
पोखरा महानगरपालीका १६ बटुलेचौर मा रहेको यस अस्पतालमा गरिब तथा विपन्न वर्गका जनताले सुविधा लिदै आइरहेका छन् । यहाँ बाट ग्राहक ले पाउने बैंक को सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
बैंकले देश COVID-19 को समस्या रहेको बेलामा पनि ग्राहकहरू को सुविधा लाई मध्यनजर राख्दै पोखरा २ विन्दावासीनि शाखा, बाझापाटन्,लेखनाथ अर्घौ त्यस्तै कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालीका बिरेठाटी मा ATM सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
प्रभु बैंक लि ले आफ्नो सेवा बिस्तार गर्ने क्रममा पोखरा १६ बाटुलेचौर बाट सम्पूर्ण बैकिङ्ग तथा ए टि यम सहितको सेवा दिन लागेको शेरचनले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा बैंकका क्षेत्रीय उपप्रबन्धक बिरेन्द्र भट्ट र बगर शाखा प्रबन्धक निर्देशक हेमन्त बाबु आचार्य आफ्ना भनाई राख्नुभएको थियो ।
नुवाकोटमा आइचर दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु
अन्नपूर्ण उत्तरी बेस शिविर ट्रेकिंग र अन्वेषण कार्यक्रम, परिचित यात्रा सम्पन्न